Daalụ, Squidoo! (Shoemoney rịba ama) | Martech Zone
Mọnde, Febụwarị 26, 2007 Tọzdee, Ọktoba 29, 2015 Douglas Karr
Nke a na izu ụka m na-eju site ụfọdụ doro anya blog ikwu spam… ebe URL bụ n'ezie a Squidoo anya. Ọ bụrụ na onwere onye nọ na kọntinent a nke na - enweghị ike iguzogide Spam, ọ ga - abụ Seth Chinekein, Na-ede akwụkwọ nke Ikike Ikike na onye guzobere Squidoo.
Rịba ama ndị Spammers: Squidoo nwere ike ọ bụghị ebe kacha mma iji melite ụlọ ahịa.
Ka o sina dị, m hapụrụ Squidoo ọmarịcha ihe edeturu na m tụlere oghere dị na ajụjụ ma chee na e nwere spammer na bọọdụ. Taa (ọ bụ Mọnde), enwetara m ụdị ederede sitere na ndị otu na Squidoo na ha lere anya na anya ndị otu ahụ ma ọ doro anya na ọ bụ ntọala maka ihu maka mgbakwunye mmekọ nke Spam nwetara. Ha kpaliri akaụntụ ahụ. Ekwenyesiri m ike ma ọ pụọ.
N'izu gara aga, eleghị anya ị nụrụ nnukwu "ime" banyere Shoemoney na-esi na MyBlogLog pụọ mgbe o zipụrụ NJ ndị ọrụ nke ndị ọzọ nọ na saịtị ya… Nsogbu na ụdị nzuzo nke MBL. Kemgbe ahụ, a nabataghachiri Shoemoney mgbe ederede site na MBL na blọọgụ ha gbasara ihe merenụ na mmeghachi azụ.
Nke a bụ m were. Enweghị m ihe ọ bụla megide Shoemoney na enweghị m ihe ọ bụla megide MyBlogLog. MyBlogLog abụwo ngọzi na blọọgụ m na ndị ọzọ maka ikpughe ọ nwetara anyị. Agbanyeghị, m ga - ekwu nke a… Ekwere m n'eziokwu na mgbe etinyere Shoemoney, ọ bụ n'ihi MBL na-echegbu onwe ya banyere ihe nzuzo ndị ọzọ na-ede blọgụ dị ka Shoemoney bu ụzọ tinye ID 3 ma tinyezie ya.
Ekwetaghị m nke ahụ MBL nwere nhọrọ Sho ruo ole Shoemoney ga-aga? Ọ ga-ewepụ otu narị ebe ahụ? Puku otu? Ọ dee ụdị ụfọdụ ụdị SQL injection ebe ọ na-ebudata nchekwa data nke NJ? MBL n'ezie amaghi ka ha bipu ya… ngwa ngwa. Nke ahụ dịịrị anyị niile mma.
Ọ bụghị maka inye Shoemoney ahụhụ, ọ bụ maka ichebe anyị. Nke ahụ abụghị ihe dị mma? Nke a abụghị ihe anyị chọrọ? N'ime otu awa, onye na-ere ahịa malitere ịgbachitere nke nwere ike igbochi mwakpo nchebe.
Laghachi na Squidoo, Shoemoney - biko rịba ama:
Agwara m ụlọ ọrụ otu ihe m nyere ha oge iji zaghachi ma meghachi omume. Enwetara m ozi nkwenye nke kelere m maka iweta ha na ntị ha, ha nyochara okwu ahụ, ma kwe nkwa ịmezi ya n'oge kwesịrị ekwesị. Mgbe m ruru ụlọ taa, enyochare m na onye ọrụ na enyo ha anya.
N'iburu nke ahụ n'uche, mgbe ịchọtara oghere nchekwa ma ọ bụ nsogbu na ngwaahịa, ị ga-eji ndị ọrụ ibe gị ụgwọ ịkọwa ozi ahụ n'oge kwesịrị ekwesị ma nye ha oge iji meghachi omume. Hindsight bụ 20/20, mana m gaara asọpụrụ Shoemoney karịa ma m gụọ na Onye njem ala ahia blog na Shoemoney na MyBlogLog rụkọrọ ọrụ iji tinye oghere nche n'abalị ahụ.
Shoemoney nwere ike kọọrọ gị ihe ịga nke ọma, dịka o nwere ike MBL ma ha gaara ekwuworị na malite n’oge akuko rue oge mgbazi erughị otu elekere. Ọ bụrụ na ha emeghachighị omume, mgbe ahụ ghaa ha! Ma etinyela ohere ahụ, ghaa ha iwe, chere ka ị hụ ihe ga-eme. Nke ahụ jọgburu onye ọ bụla.
Site na ịkọ akụkọ na ichere na nzaghachi, ọ gaara eme ka nsogbu ghara ịdị, zere boycott, zere okwu gazillion gafee ọtụtụ blọọgụ, ma gaara echekwa ndị ọrụ ahụ site na ngosipụta ID ha… mmeri maka mmadụ niile. A gaara m ekele Shoemoney ma m ga-ekele MBL. Ọ gaara egosi na ha abụọ na-achọ mụ na gị.
Oh ee… daalụ, Gil (si Squidoo). Daalụ, Seth! Enwere m ekele na ị wepụtara oge iji dozie okwu a ma na-ele anya maka anyị niile.
PS: Anaghị m achọ agha agha ịmalite. Ana m asọpụrụ Shoemoney - ọ bụ nnukwu ike nke onye na-ede blọgụ nwere nnukwu ihe na-eso ya. Ọ nwere nkà ma nwee ọganiihu. Enwere m olile anya ịnweta ọkara ekpughe na ọ nwere otu ụbọchị. Naanị m chọrọ itinye echiche m n'ebe ahụ ma nwee olileanya na ọ ga-echegharị ụzọ ahụ mgbe ihe dị ka nke a ga-eme n'ọdịnihu. O doro anya na ọ ga-ahụ okwu ndị ọzọ na ngwa ndị ọzọ… Ana m atụ anya ka ọ na-enyere aka n'ichebe anyị niile!
Feb 26, 2007 na 8:06 PM
Anaghị m esonye na ndị na-enwu ọkụ… nke ukwuu nke oge na-adịghị oke uru na nke ahụ =)
Gị na-efu ọtụtụ akụkọ ihe mere eme na ihe na-eme n'azụ Mpaghara ma ihe mybloglog mere izu gara aga 😉
Feb 26, 2007 na 8:10 PM
Daalụ maka ịga! Enwere m ekele maka ya na ị bụ eziokwu - m bụ naanị ndị ọzọ na nke a ka nghọta m wee bụrụ nke na-enweghị isi.
Enwere m ekele maka eziokwu ahụ na ị naghị esonye n'agha ọkụ, ana m asọpụrụ ndị na-ede blọgụ na-ezere esemokwu (na nke ahụ abụghị isi nke a).
Naanị m na-atụ anya nkwurịta okwu ka mma n'etiti ngwaahịa na ndị mmadụ, na-enyefe blọọgụ na ikpo okwu na-eme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ma na-enye ndị mmadụ uru nke obi abụọ ime ihe ziri ezi.
Gr mejuru MBL nke ọma maka nwa oge ebe ahụ. Enwere m olileanya na ihe dị na mma.
Daalụ ọzọ maka ileta! Olileanya na ị na-abịa n'azụ.
Feb 26, 2007 na 11:05 PM
Enwere ike ịkọwa nwoke ahụ dị ka nnukwu nzuzu nzuzu. Obere ihe ndị ahụ anyị na-echeghị banyere ha na-abịaghachi mgbe ụfọdụ. Ọ dịghị okwu ọzọ ruru ka nzuzu aka… ..
Feb 27, 2007 na 8:23 PM
Isi okwu oma ikwuru ebe ahu!